Izidumbu (58) ezingaziwa emakhazeni aseThekwini - Ilanga News
Home Izindaba Izidumbu (58) ezingaziwa emakhazeni aseThekwini
Izidumbu (58) ezingaziwa emakhazeni aseThekwini
Kunxuswa abasadukelwe yizihlobo ngenxa yezikhukhula ukuyobheka
LUCKY CAIN UMNYANGO wezeMpilo KwaZulu-Natal, unxusa labo abasadukelwe ngamalungu emindeni yabo ngenxa yezimvula ezinamandla ezadlula nenqwaba yemiphefumulo yabantu ngeledlule ukuba bahambele amakhaza kahulumeni ukuze bayobheka izihlobo zabo. NgoLwesibili uNgqongqoshe walo Mnyango uNkk Nomagugu Simelane, uveze ukuthi umnyango wakhe usuhlonze izidumbu ezilinganiselwa ku-318 ngenxa yalezi zimvula kanti zibalelwa ku-58 ezingakahlonzwa. Unxuse imindeni engakazitholi izihlobo zayo ukuthi iye emakhazeni kahulumeni asePhoenix nasePinetown, nokuyilapho ezinye zalezi zidumbu ezitholakele ezigcinwe khona.
Uthi ngalokhu bazama ukugwema ukumbondelana kwezidumbu kula makhaza njengoba siqhubeka nokwanda isibalo sabatholakala sebeshonile ezindaweni ezahlukene, ikakhulukazi ngaphansi kweTheku. Ukusho lokhu kusanenqwaba yamalungu emindeni asathungatha izihlobo zayo kulandela lezi zimvula ezenzeke ngesonto eledlule lapho kubhidlike imizi nemigwaqo, kwaphinde kwalimala nezakhiwo zikahulumeni. Kuzokhumbuleka ukuthi imindeni okubalwa kuyo owakwa Gwala, eClermont nowakwaMdlalose, eMzinyathi (abalahlekelwe ngamalungu angu-10) ngeminye yaleyo esathungatha izihlobo zayo.
Ngemuva kwalesi sigameko uMengameli Cyril Ramaphosa, wamemezela ukuthi iKwaZulu-Natal, isiyindawo yenhlekelele okusho ukuthi kumele yonke iminyango kahulumeni yenze konke okusemandleni ukuqinisekisa ukuthi ulungiswa ngokushesha umonakalo futhi abathintekile bayaluthola usizo. Ngakolunye uhlangothi uMasipala weTheku umemezele ukuthi uzimisele ukusiza imindeni eshonelwe ngemali elinganiselwa ku-R15 000 ezosiza ngezindleko zokungcwaba. Okhulumela lo masipala uMnu Msawakhe Mayisela, uthe bazokhipha lesi samba kwilungu ngalinye elishonile emndenini. Ukuze abantu bahlomule kulolu sizo kuzomele bathole incwadi yekhansela ezoqinisekisa ukuthi liyazi ngesimo somndeni, isitifiketi sokufa, umazisi, isitatimende sasebhange salowo okumele ahlomule
nencwadi efungelwe esemthethweni.
Previous articleUhlaselwe yisifo sohlangothi uLira
Next articleINKOMBANKOMBANE KWEYENKOHLAKALO EZULULAND